“Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy manana ota”. Heb. 4:15
Mitoetra ao amin’izay mandray Azy amim-pinoana i Kristy. Na dia mihatra amin’ny fanahy aza ny fizahan-toetra, ny fanatrehan’ny Tompo kosa dia hiaraka amintsika hatrany. Ilay roimemy nirehitra izay nanambara ny fanatrehan’ny Tompo dia tsy levona. Tsy nahalevona na dia ozatra kelin’ny rantsan-kazo iray monja aza ny afo. Toy izany koa no hiseho amin’ny olombelona malemy izay mametraka ny fitokisany ao amin’i Kristy. Mety handoro ny afon’ny lafaoron’ny fakam-panahy, mety ho tonga ny fanenjehana sy ny fizahan-toetra, saingy ny tain-drendrika ihany no ho levona. Vao mainka hamiratra ny volamena noho ilay fomba fanadiovana.
Lehibe lavitra Izy izay ao amin’ny fon’izay mino, noho ilay mifehy ny fon’ireo tsy mino. Aza dia mitaraina mafy loatra ny amin’ireo fizahan-toetra mahazo anao, fa aoka ny masonao hibanjina an’i Jesosy, Izay nanarona ny maha-Andriamanitra Azy tamin’ny maha-olombelona, mba hahafantarantsika ny halehiben’ny fitiavany antsika hatramin’ny nahatsapan’ny tenany manokana ny fahorian’ny olombelona. Efa nanadrana ny kapoaky ny alahelon’olombelona Izy. Efa ory tamin’ny fahoriantsika rehetra Izy. Natao tanteraka tamin’ny alalan’ny fahoriana Izy, nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka ny nakana fanahy ny olombelona, mba hahazoany mamonjy ireo izay zohin’ny fakam-panahy.
Hoy Izy: “Dia hataoko ho saro-tadiavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona, eny, noho ny tena volamena avy any Ofira aza” Isa. 13:13. Ataony sarotadiavina ny olona iray amin’ny fiarahany mipetraka aminy, amin’ny fanomezany azy ao anatiny ny Fanahy Masina. Hoy Izy: “Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lio. 11:13
Nampianatra antsika ny Tompo mba hiantso an’Andriamanitra ho raintsika, mba hijery Azy ho ilay toerana fanovozana ny fitiavan’ny ray, ho ilay loharanom-pitiavana mikoriana avy amin’ny taonjato iray ho amin’ny taonjato iray, tamin’ny alalan’ny fantson’ny fon’olombelona. Ny indrafo rehetra, ny fangorahana , ary ny fitiavana izay hita manerana ny tany nivoaka avy teo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Avokoa, ka, raha ampitahaina amin’ny fitiavana izay mitoetra ao am-pony, dia toy ny loharano manondraka ny ranomasimbe ireny rehetra ireny. Mikoriana tsy mijanona hatrany ny fitiavany mba hampahatanjaka ny malemy, hahamatotra ny malemy fo, ary hanome teny fampirisihana ho an’izay mirenireny.
Miasa amin’ny alalan’i Kristy Andriamanitra ary azon’ny olona hatao ny manatona ny Ray amin’ny anaran’ny Zanaka.